पब्जीको यो कस्तो क्रेज ! विवाह मण्डपमा बेहुला पब्जी खेल्न ब्यस्त – Nepal Trending
On १९ जेष्ठ २०७६, आईतवार ०९:५६
काठमाडाैं। पब्जीबारे नेपालमा पनि धेरै बहास चल्याे । सरकारले त पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय समेत गरेकाे थियाे तर सर्वोच्च सरकारकाे उक्त निर्णयलाई कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दियाे । सरकारले पब्जी खेलले बालबालिकालाई मानसिक रुपमा असर पर्ने भन्दै सबै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी हरुलाइ पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन उर्दी गरेको थियो ।
सरकारले पब्जी प्रतिबन्ध लागउने निर्णय गरेपछि समाजिक सञ्जालमा धेरैले खुसी ब्यक्त गरे तर पब्जी खेल्नेले भने सरकारकाे निर्णय प्रति विराेध जनाउँदै सर्वाेच्चमा रिट दयार गरे । केही ब्यक्तिले पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाएर सकारले इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन गराएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दयार पछि सर्वाेच्चले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नगर्न आदेश दिएकाे थियाे ।
अहिले कतिपय देशमा त यो गेम प्रतिबन्ध नै लगाइएकाे छ । पब्जीमा युवाहरू कति क्रेजी हुन्छन् भन्ने कुरा एउटा नयाँ भिडियो हेरियो भने थाहा पाइन्छ । जुन भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेकाे छ । सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको उक्त भिडियो खासगरी टीकटकमा चर्चित छ । फेसबुक र ट्वीटरमा पनि उक्त भिडियोलाई लिएर व्यंग्य गरिएको छ ।
बेहुलीको साथमा जग्गेमा बसिरहेको एक युवकले आफ्नो मोबाइल फोनमा पब्जी खेलिरहेको छ । फूलमाला र नयाँ कपडामा बेहुलीकाे वास्ता नै नगरि पब्जी खेल्नमा ब्यस्त छन् ।जग्गेमा बसिरहेको युवक पब्जी खेलिरहँदा बेहुली भने उसैतर्फ हेरेर मौन छन् ।
त्यसो त, यही वर्ष दुबईमा एक महिलाले पब्जीमा ब्यस्त आफ्ना श्रीमानलाई गेम खेल्न रोक्न खोज्दा डिभोर्स नै पाएकी थिइन् । भारतमा भने गत महिना मात्रै १६ वर्षे किशोरले पब्जी खोल्न आमाले रोकेपछि आत्महत्या नै गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
अन्ततः प्रहरीमाथि गरेको धक्कामुक्की प्रति पारसले यसरी मागे माफि
आईसीसी बरियतामा स्टिभ स्मिथको ठुलो फड्को , कोहलीको स्थान संकटमा
रबिलाई जेलमै भेटेर काठमाडौं आए रमेश प्रसाई , गरे यस्तो...
लोक स्टारका प्रतियोगीको खु’लासा ! मिडियमा आए यी प्रतियोगी लोक...
कप्तान दिमुथ करुणारत्ने चम्किएपछि न्युजिल्याण्डबिरुद्ध श्रीलंकाको शानदा जित
ट्रेनिङको नाममा १५ दिन जम्मू–कश्मीरमा डुलेर फर्किए धोनी
रबि १८ दिन भित्रमा धरौटीमा रिहा, सिधाकुरा जनतासंग कार्यक्रम ३...